Farmaajo oo War kasoo saaray geerida Taliyihii hore ee Ciidanka Asluubta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Farmaajo oo War kasoo saaray geerida Taliyihii hore ee Ciidanka Asluubta
Ardaan Yare 28 March 2021
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid Alle ha u naxariistee Taliyihii hore ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Janaraal Ismaciil Axmed Ismaaciil oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Geerida ku timid Alle ha u naxariistee Janaraal Ismaciil Axmed Ismaaciil waa mid murugo badan. Marxuumku wuxuu u soo adeegayey Qarannimada Soomaaliyeed muddo dheer, waxa uuna qeyb ka ahaa qorshihii aasaaskii Ciidanka Asluubta”
Kulankii Maanta ee Xildhibaanada Golaha Shacabka oo hal ariin loo baajiyay